GeoFS: Lalao simulation aerial avy amin'ny navigateur mampiasa Cesium | Avy amin'ny Linux
Izaho manokana dia tsy mihevitra ny tenako a Gamer Passionate, nefa miaiky aho fa tiako lalao lalao fiaramanidina, na ady tsotra na sidina an'habakabaka izy ireo. Saika tsy namaky momba izany aho GeoFS, lalao an'ny simulator sidina maimaimpoana maimaimpoana, Nanapa-kevitra ny hanandrana izany avy hatrany aho ary hijery hoe manao ahoana izany.
Raha ny filazan'ny mpamolavola azy, ao aminy tranokala ofisialy, faritana fohifohy hoe:
"Simulator sidina an-tserasera maimaimpoana".
Na izany aza, azontsika atao kokoa ny milaza azy io, a lalao simulation sidina, azo idirana, maimaim-poana, miorina amin'ny tranokala, Multiplayer ary mampiasa sary zanabolana erantany mba hamerenana hamorona ny sarintany sy ny sariny.
1 GeoFS: simulator sidina an-tserasera maimaim-poana
1.1 Inona ny GeoFS?
1.4 Fanandramana manokana
GeoFS: simulator sidina an-tserasera maimaim-poana
Inona ny GeoFS?
Ity lalao vaovao, manavao sy mahaliana ity dia noforonin'i Xavier Tassin, manodidina ny taona 2010. Niasa nanjary a plugin ao amin'ny fampiharana Google Earth. Raha anio GeoFS mampiasa teknolojia open source antsoina hoe CesiumJS hanomezana ny tontolon'ny habakabaka manerantany hitan'ny mpilalao.
Noho izany, ny GeoFS dia azo averina mora foana ary tsy andoavam-bola tanteraka, avy amin'ny Operating System izay afaka mitantana tranokala maoderina. Ho fanampin'izay, miaraka amin'ny fanaraha-maso notsorina izay mahatonga ny simulator sidina ho tena eo amin'ireo efa misy ankehitriny, iray amin'ireo mora azo indrindra, izany hoe, mora raisina sy milalao.
"Na dia tsotra aza, ny maodelin'ny sidina GeoFS dia feno ampy hanolorana traikefa fanaingoana sidina azo tanterahina. Mihoatra ny lalao, GeoFS dia simulator sidina tena izy". Momba ny GeoFS
Ny fananana karazana fiaramanidina misy isan-karazany dia tokony hanome fahafaham-po ireo mpankafy fiaramanidina rehetra. Ny safidy dia afaka miainga avy amin'ny fiaramanidina kely Piper Cub kely mankany amin'ny Airbus A380 sarotra sy goavana.
Ny tontolon'ny habakabaka eran-tany (tontolo iainana) dia avy amin'ny sary zanabolana sy angona nomerika nomerika.
Afaka hazakazaka maimaimpoana izy amin'ny tranonkala rehetra maoderina nefa tsy mila mametraka na inona na inona.
Manome famandrihana ny sary an'habakabaka famaritana avo eran'izao tontolo izao (mety amin'ny sidina VFR) sy ny fametrahana rindranasa roa misy ho an'ny finday ny sehatra misy azy.
Tsy mitsaha-mivoatra izy io noho ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina misy azy izay mandray anjara mavitrika amin'ny fananganana fiaramanidina vaovao na fampiroboroboana fanampiana ho fanatsarana ny endrika efa misy mba hanomezana traikefa nahafinaritra mahafinaritra kokoa isan'andro.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha dia mora azo izy io ka azo lalaovina haingana sy haingana be. Ary izany dia noho ny fanaraha-maso tsotra azy. Ary izao no manaraka:
+ Ary - lakilen'ny fihazakazahana / hampihenana tsikelikely.
Fanalahidy 0 ka hatramin'ny 9 hanafainganana / hanafoanana ho azy. Ny maha fanalahidy 9, ilay mpamadika ho feno.
Ny fitaovana manondro totozy dia miasa ho toy ny tehina mpitari-dalana amin'ny fanitsiana ny fahitana.
Azo atao ny mitantana ny fiaramanidina amin'ny keyboard sy / na totozy, ohatra, rehefa manafaingana isika dia afaka mampiasa ny zana-tsipìka eo amin'ny kitendry na ny fihetsiky ny totozy hanainga na hidina, ary hiakatra na hidina.
Ny fanovana fakan-tsary (zoro fijerena) dia misy amin'ny alàlan'ny menio na amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra «C».
Mamela ny fitaovam-piantsonana hampiakatra na hampidinina amin'ny alàlan'ny fanindriana ny fanalahidy «G» sy ny fanerena feno amin'ny fanindriana ny bokotra «Space»
Raha mila fanazavana fanampiny momba toromarika Raha te hampiasa keyboard, totozy na fanaraha-maso lalao (joystick) dia tsy maintsy miditra amin'ity manaraka ity ianao rohy.
Izaho manokana dia tiako be dia be, satria, hitako fa tena mora ampiasaina izy io, novonoina mora foana tamin'ny ahy Distro GNU / Linux MilagrOS (MX Linux) momba ahy Mpizaha tranonkala Waterhio, ary tiako koa ny fiaramanidina isan-karazany azo zahana.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" ity lalao vaovao, manavao sy mahafinaritra ity dia nantsoina «GeoFS», izay amin'ny ankapobeny lalao simulator sidina an-tserasera maimaimpoana mampiasa teknolojia malalaka sy misokatra nomen'i césium ny alalan ' CesiumJS; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » GeoFS: Lalao simulation aerial avy amin'ny navigateur mampiasa Cesium
Araka ny efa nampoizina dia efa nanomboka nihetsika tamin'ny famoahana ny kaody XP i Microsoft
Sokafy Visual Traceroute: Fitaovana Open Source Network